Ọnọdụ gbara ọchịchịrị ma ọ bụ ọnọdụ abalị bụ ihe ọtụtụ ndị ọrụ maara. Anyị nwere ya dị n'ọtụtụ ngwa na elele na WearOS na-ejikwa ya. A na-ewebata gam akporo a na nyocha dị iche iche ruo ogologo oge, ọ bụ ezie na ọ naghị agwụ ma ọlị. Ọ bụ ezie na ndị na-emepụta OLED meziri ka ọ jiri ya.
Ma, ọtụtụ ndị ọrụ gam akporo na-eche ka ọ rute na ọkwa. O yiri ka ọ dịkarịa ala na ụdị dị ọcha nke sistemụ arụmọrụ ọ ga-eme. N'ihi na Google na-ezube iwebata ya na mmelite ndị ga-eme n'ọdịnihu. N'ezie, na-atụ anya ịbịaru nso na Pixel Launcher.
Ọnwa ole na ole gara aga agbakwunyere ọnọdụ gbara ọchịchịrị na listi ọrụ nke nsụgharị nke sistemụ arụmọrụ n'ọdịnihu. Nke a bụ nzọụkwụ mbụ maka ọnọdụ a iji jikọta ya na ekwentị ndị na-eji sistemụ arụmọrụ. Agbanyeghị, ọ dị ka ihe niile anwụrụ. Ruo ugbu a.
N'ezie, na gam akporo P ị nwere ike ịhụworị ihe ịrịba ama mbụ ya. Ebe ọ bụ na ọ hụrụ na Ọ ga-abụ onye na-ebido mmiri ebe ị ga-enwe ike ịgbalite ọnọdụ ọchịchịrị a na ekwentị. N'ebe ahụ, anyị ga-ahụ mgbanwe nke ga-enye anyị nhọrọ a. Ọ bụ ezie na ọ bụ naanị ya na Google Pixel, nke nwere ugbu a nwere ọnọdụ gbara ọchịchịrị akpaka.
Google etinyela nkwado maka ọnọdụ abalị a na ekwentị ha. Kedu nke bụ ihe dị mkpa, maka na ndị ọrụ chọrọ inwe ike iji atụmatụ a na ekwentị ha. Mana amabeghị mgbe ọ ga-erute ekwentị niile na eze.
Ozi ọma ahụ bụ na ọ dị ka ụlọ ọrụ mechara na-arụ ọrụ na ya, ọ bụ ezie na ekwentị gam akporo ga-echere. Ebe ọ bụ na n'ezie ndị Pixels bụ ndị mbụ nwere ohere a. N'oge anyị maara nke ahụ Ihe nkwụnye Pixel ga-agụnye ọnọdụ gbara ọchịchịrị na ụfọdụ n'ime mmelite ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Ọnọdụ gbara ọchịchịrị na-abịa na gam akporo yana mmelite na-abịanụ